ဘုန်းငိုတောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘုန်းငိုတောင်
Posted by phone_kyaw on May 9, 2012 in Copy/Paste |6comments
၂၀၀၂-ခုနှစ်မှာ PDF က စစ်သင်တန်းလုပ်တယ်။ သင်တန်းဆရာ ကိုငြိမ်း၊ လက်ထောက်နည်းပြနှစ်ယောက်နဲ့ သင်တန်းသား အယောက်နှစ်ဆယ်လောက်ကို သင်တယ်။ လက်ထောက်နည်းပြနှစ်ယောက်ကတော့ ကိုမင်းထက်၊ ကိုကျော်ထွန်း (ပအို့တိုင်းရင်းသား) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အားလုံးက နအဖတပ်က တစ်ကြပ်၊ တစ်ကြပ်ကြီးတာဝန်နဲ့ တော်လှန်ရေးသမား(တနည်း) သူပုန်တွေနဲ့လာပြီးပူးပေါင်းခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့။ စစ်သင်တန်းကိုတက်ဖို့ လူဘောင်သစ်(တောင်ပိုင်း)က ကွန်မန်ဒိုတွေဖြစ်တဲ့ ကျနော်၊ ကျော်စွာဝင်း၊ ငယ်ထွေး၊ ကိုရန်ကျော်တို့တက်ကြတယ်။ သင်တန်းက သုံးလကြာတယ်။ PDF ကရဲဘော်တွေဆိုတာကလည်း၊ လူ့ဘောင်သစ်ကရဲဘော်တွေလို…အတူတူနေ၊ အတူစား၊ သောက်၊ ညီရင်း အစ်ကိုလိုနေကြတယ်။ ရန်ဖြစ်တာမရှိသလောက်ပဲ။
နောက်နေ့မနက်မိုးလင်းတော့ KNU ကဗိုလ်ရွှေတို့အဖွဲ့  ရှေ့ ထွက်မိုင်းနှစ်လုံးနဲ့ ချလိုက်တာ ရန်သူနှစ်ကောင်ကားကနဲ။ ဒဏ်ရာကတော့မပြောနဲ့။ ရှေ့ ထွက်မိုင်းပါဆိုနေမှ… ဗျောက်အိုးမှ မဟုတ်တာနော်။ ဒီမှာတင် သူတို့အနောက်က ၊ စောင့်နေတဲ့ကျနော်တို့အဖွဲ့တွေ အရမ်းပျော်ပြီ။ ဟေ့..ဗိုလ်ရွှေ..ခွေးဘယ်နှစ်ကောင်သေပြီလဲဟ…လို့ စက်နဲ့လှမ်းမေးကြတယ်။ ဗိုလ်ရွှေနဲ့အဖွဲ့ကို ဂုဏ်ပြုကြတယ်။ ဗိုလ်ရွှေတို့တာဝန်ကြေပြီ။ ကျနော်တို့အလှည့်။
နောက်နေ့မနက်မိုးလင်းတော့ နေရာတနေရာထပ်ပြောင်းတယ်။ ဘာရမလဲ ဒီဂွင်ကကျနော်တို့ဂွင်ဆိုတော့..ဘယ်နေရာမှာလမ်းရှိလဲ၊ ခြုံရှိလဲဆိုတာ သိတယ်။ တခြားနေရာမှာပြန်စောင့်ပေါ့။ ကံကောင်းတာလား၊ ကံဆိုးတာလားတော့မသိဘူး။ ၁၅ မိနစ်လောက်စောင့်တာနဲ့ ရန်သူအသံကြားနေရပြီ။ ဒီမှာတင် ရွာထဲကနေထွက်လာတဲ့ ရန်သူကို ကျနော်တို့အဖွဲ့တီးပါလေရာ။ ရှေ့ ဆုံးပွိုင့်က ရဲဘော်လေးကို ကျနော်တို့ရဲ့ တပ်စိတ်မှုး KNU တစ်ကြပ်ကြီး M16 နဲ့တစ်ချက်ပဲပစ်တယ်။ နှမစောင်း ကားကနဲပဲ။ လက်မောင်းကနေ နှလုံးကိုဖောက်ဝင်ပဲ။ တခါတည်းသေ။ ဒီကောင်လဲသွားတော့ အနောက်ကရဲဘော်တွေက ရဲမြင့်အောင်ထိသွားပြီ….ဆိုပြီအော်တယ်။ သြော်…သေတဲ့ကောင်နာမည်က ရဲမြင့်အောင်ကိုး။
တခါမှ RPG ပစ်တာမသင်ခဲ့ရဘူး။ ဘယ်လိုပစ်ရမလဲ။ ထိုင်ပစ်ရင်ကောင်းမလား။ မက်တပ်ရပ်ပစ်ရင်ကောင်းမလား။ မတ်တပ်ရပ် ပစ်ရင်လည်း မသာဘယ်ဈေး လဲဖြစ်အုံးမယ်။ မလန်းနိုင်ဘဲ၊ ကားသွားနိုင်တယ်။ ထိုင်ပစ်တော့လည်း အဆင်မပြေ။ ထိုင်ပစ်ရင်…ဟို…ခွေးမသားတွေကိုမမြင်ရဘူး။ ဒီတော့ထိုင်လည်း၊ မထိုင်၊ မတ်တပ်လည်းမရပ်ဘူး။ ဒူးထောက်ပြီးပစ်တယ်။ ကံဆိုးချင်တော့ RPG ရဲ့ ပို့ယမ်းက မိုးစိုနေတော့ မထွက်ဘူး။ နောက်တခါထပ်ပစ်တယ်။ မရဘူး။ ဟာ…သွားပြီ။ အားလုံးက ပြေးဖို့စတင်နေပြီ။ ဘာရမလဲ ကျနော်အသားကုန်ပြေးပြီ။ ကျနော်ပြေးတော့ KNU က တစ်ကြပ်ကြီးက ဟရောင်…မပြေးနဲ့..ငါ့ကိုပေး..ငါ့ကိုပေး…ဆိုပြီးလှမ်းပြောသေးတယ်။ကျနော်ကပြန်ပြောတယ်…မထွက်ဘူးဗျ…လို့။ နောက်ဆုံးကျနော်တို့ပျောက်ကြားအဖွဲ့ တောင်ပေါ်ကိုတက်ပေးကြတယ်။ အနောက်က ရန်သူက အသေးကော၊ အကြီးကော ထုလိုက်တာစောက်ရမ်းပဲ။ ကျည်ဆံပေါတာကိုး။
နောက်ဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကိုမင်းထက်တို့အလှည့်ရောက်တော့ ရန်သူ, လည်သွားပြီ။ ရွာက ကောင်မလေးတွေကိုခေါ်၊ အရာရှိတွေဘေးကနေကာပြီး ခေါ်သွားကြတယ်။ ဒါကို….ကိုမင်းထက်နဲ့ရဲဘော်တွေတွေ့တော့ ဘယ်လို့မှပစ်မရဘူး။ သူတို့ကမှ ကံဆိုးတာ။ ရန်သူကိုမြင်နေရပြီ။ ရုပ်ရှင်ထဲကလိုပဲ။ ကောင်မလေးတွေကိုတွေ့တော့ ဒေါသမထွက်နိုင်တော့ဘူး။ ရန်ခုန်တာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပုံရတယ်။
ခင်ဗျားက အဲဒီအတွက် ဂုဏ်ယူနေတာလား။တကယ်ခံယူချက်ရှိရင်နိုင်ငံခြားမှာ ဘာဘီကျူ စားမနေသင့်ဘူး။
ကိုယ့်အချင်းချင်း သတ်နေရတာကို ဂုဏ်ယူချင်တဲ့ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်ကိုတော့ အံ့သြမိတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေက ခင်ဗျားထက်တိုင်းပြည်ပိုချစ်တယ်လို့ ကျုပ်မြင်တယ်။ခင်ဗျားတောင်
သေမှာကြောက်သေးတာ သူတို့မှာလဲ အသက်နဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ဆိုတာတော့ ခင်ဗျားစဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်။တော်ပြီဗျာ ခင်ဗျားဟာဖတ်ရင်စိတ်ပိန်ရတာများတယ်။
ခဲ့လဲဆိုတာ ဒီမှာတင်ပေးကြည့်ပါ။ငါက မင်းတို့ပြောတဲ့စစ်ခွေး မဟုတ်ပေမယ့် စစ်ခွေးထက်မင်းတို့ကိုပို
စက်ဆုတ်တယ်။မင်းကမှစစ်ခွေးကွ မင်းအဖေကဘာလဲ မင်းကိုတိုင်ကြေငြာထားတာပဲလေ။
ကိုယ့်အချင်းချင်း(တိတိကျကျပြောရရင် မင်းအဖေအမျိုးကို သတ်ရတာ မင်းဂုဏ်ယူတယ်ပေါ့)
ကြောက်လို့ပုန်းပစ်၊ နိုင်ငံခြားမှာ စတေးရှောင်နေတဲ့ မင်းလိုကောင်တွေက ရိုဟင်ဂျာတွေအကြောင်းအော်နေတာငါဖြင့်ဖတ်ရတာ(မင်းမပါသေးဘူး)ချက်ခြင်းထသတ်ချင်စိတ်ပေါက်နေတယ်။ငါသာအာဏာရှိတဲ့ကောင်ဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ကောင်တွေကိုအကုန်သတ်ခိုင်းမယ်။သေနတ်နဲ့ပစ်ရင်ကျည်ကုန်တယ်။ အလောင်းမင်းတရားကြီးလို ၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ရိုက်သတ်မယ်ကွ။
တိုက်ပွဲတွေတိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ တစ်ဘက်ကရန်သူ ကိုဘုန်းကျော် လက်ချက်နဲ့ကျသွားအောင် ပစ်ခဲ့ဘူးလားခင်ဗျာ… အစ်ကိုကိုယ်တိုင် ပါဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေမှာ နိုင်တာရောရှိခဲ့ဘူးလား? ဒီထဲမှာတော့ ပြေးတဲ့အကြောင်းကြီးပဲရေးထားလို့…
ဟုတ်မှာ အဲ့သည်တုန်းကဖစ်မယ် သဒင်းမှာပါဒယ်
တပ်မတော်သား နှစ်ယောက် တိုင်းပြည်တွက်အသက်ပေးလှူ
( ပြောတာပါဘဲ မောင်ဖုန်းကျော်ရာ ဒေသခံတွေကတော့ ငချဉ်ဘဲ
စစ်တပ်လာလဲ မျက်နှာမာနဲ့ နှိပ်စက်သွားတာဘဲ သဘုံလာလဲ မျက်နှာချိုနဲ့
နှိပ်စက်သွားတာဘဲ သူ့ကိုငါအပြစ်ပြောငါ့ကိုသူအပြစ်ပြောနဲ့ ဘယ်ကောင်မှ
သေနတ်နဲ့ချိန်ပြီး မင်းတို့ဘာကောင်တွေလဲဆိုပြီး စောက်ခွက်ပြောင်ပြီး
နို့ခင်ဗျားရော လုပ်ဘူးသေးလား ? )
ဘုန်းကျော်သည် သြစတျေးလျနိုင်ငံတွင်နေသည်။ ၁၉၇၉-ခုနှစ်တွင် အင်းစိန်မြို့ တွင်မွေးပြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်ရှိ စစ်တပ်ထဲတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ အဖေဖြစ်သူသည် တကြပ်ကြီးတဦးဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉-ခုနှစ်တွင် ဘုန်းကျော်တောခိုခဲ့သည်။ နယ်စပ်ကလူ့ ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင် ၁၉၉၉-၂ဝဝ၅ ထိ တာဝန်ထမ်းသည်။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်သည် သြစတျေးလျနိုင်ငံရှိ ရွှေတူးဖော်ရေးမိုင်းတခုမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ခင်ဗျားမေ့မှာစိုးလို့ ခင်ဗျားအကြောင်း copy/paste လုပ်ထားတာပါ။
ခင်ဗျား ဘယ်လောက်ခံယူချက်ရှိပြီး တိုင်းပြည်အတွက်ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါသလဲ။
ကိုယ့်အမျိုးအချင်းချင်းသတ်ရတာ ၀မ်းသာနေတဲ့ ခင်ဗျားလို ကောင်ကို အံ့သြတယ်။
ကျုပ်သာတပ်ထဲက အာဏာရှိတဲ့ကောင်ဆို ခင်ဗျားပြန်လာတာနဲ့ ချက်ချင်းသတ်ခိုင်းမယ်။
ခင်ဗျားဘာရည်ရွယ်ချက် ဘာအတွက်နဲ့ အချင်းချင်းသတ်ရတာလဲ ဆိုတာရှင်းပြပါ။
ကျုပ်လဲ အာဏာရှင်ကိုမုန်းတဲ့ ပြည်သူတစ်ယောက်ပါ။
ဒါပေမယ့် စစ်တပ်ထဲမှာ (ကျွန်တော့အသိ) ခင်ဗျားထက်စိတ်ဓါတ်ကောင်းတဲ့သူတွေ
အမျိုးချစ်သူတွေ အများကြီးပါ။သူတို့ရင်ဖွင့်သံတွေကို နားထောင်ခဲ့ရပါတယ်။
လက်အောက်က ငယ်သားတွေက သိပ်သနားစရာကောင်းပါတယ်ဗျာ။
ထမင်းတောင်မစားရတဲ့ရက်တွေက သူတို့အတွက် ရိုးနေပြီတဲ့။ ခင်ဗျား ထမင်း ဘယ်နှရက်
ငတ်ဖူးပါသလဲ။တောင်ကုန်းတစ်ခု တက်ပြီးမောနေတာ၊ RPG ထမ်းရတာပင်ပန်းတယ်ထင်နေရင်
ဗမာတပ်မတော်က တပ်သားလေးတွေကိုမေးကြည့်ပါ။ခင်ဗျားလိုကောင်ကို အရူးလိုဝိုင်းကြည့်ပါ
လိမ့်မယ်။မြန်မာ့စိတ်ပျောက်နေတဲ့ ခင်ဗျားလိုလူကို ပြောရတာလက်ညောင်းတယ်ကွ။
ဖတ်ရင်းနဲ့ မဆီမဆိုင်သေ သွားတဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေနှမျောလိုက်တာဗျ။
ဘယ်ဆီ ဘယ်ဝယ် ဘယ်သူတောင်းစားဆီကလာမှန်းမသိတဲ့ အမိန့် ကိုနာခံ
နေရတဲ့ သူတွေကို သနားမိပါတယ်ဗျာ